Miandry fitraoram-bahoaka ? | NewsMada
Miandry fitraoram-bahoaka ?
Inona ihany re no zavatra mandeha ara-dalàna eto amin’ny firenena ? Angamba hiara-kihoraka ny rehetra hoe : tsy misy ! Aoka tsy handeha na hanakatra lavitra. Ohatra iray, mitohoka amin’ny tenda ny ndeha horaisina, ny amin’ny famatsian-jiro sy ranon’ny Jirama. Tato anatin’ny andro maromaro izao, mampikaikaika sy mampitaraina fatratra ny ankamaroan’ny mpanjifa ny fiverenan’ny delestazy sy ny fahatapahan-dranon’ny Jirama. Tsy amin’ny faritra iray na roa fa saiky manerana ny faritra maro, eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Raha mahafaty ny ompa, angamba efa tsy nisy niangana ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama.
Aiza rey olona ka efa any ho any amin’ny iray maraina vao mba mandeha ny rano. Amin’izay indray, toy ny pipin-tsaka (miala tsiny amin’ny voambolana) ny fandehany. Mikorontana ambony ambany ny fiainan’ny tokantrano maro vokatr’izany. Afoy ny torimaso noho ny filaharana mameno sinibe. Izay tsy maharitra, noho ny harerahana miari-tory, tsy mahazo rano ampiasaina, hidiovana sy hahandroan-tsakafo. Tsy maintsy hatrehina koa anefa ny fifohazana maraina noho ny fitadiavana. Ny tsy fandriampahalemana ao anatin’izany rehetra izany, tsy lazaina intsony.
Tsy rariny, ary efa tafahoatra loatra ny ataon’ny Jirama. Famonoan’olona mihitsy aza ny andikan’ny mpanjifa maro izany. Ny mpanjifa, tsy te hahalala izay hoe antony teknika mahatonga izany. Ny azy ireo ny fantany, mahaloa ara-dalàna ny faktiora izy, ary miandrandra kalitaon’ny servisy avy amin’ny mpivarotra. Aoka tsy hohadinoina fa varotra toy ny varotra rehetra izany, ary « ny mpividy dia mpanjaka », araka ny fitenenana. Rehefa tsy mahavita, tsy mahavaha ity olana tsy misy farany ity izay tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama ao, ny miala fotsiny izao no tokony hataony. Tokony handray fepetra hentitra mikasika ity fahoriam-bahoaka momba ny jiro sy rano ity ihany koa ny mpitondra fanjakana. Maika noho ny maika rehetra izany, mba tsy hifoteran’ny fitraorana sy ny fipoahana… sosialy.